चर्चित कलाकार लक्ष्मी गिरीलाई फेरी किन रुँदै हिँड्नु पर्यो ? - Mitho Khabar
June 17, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on चर्चित कलाकार लक्ष्मी गिरीलाई फेरी किन रुँदै हिँड्नु पर्यो ?
र्चित कलाकार लक्ष्मी गिरीलाई फेरी किन रुँदै हिँड्नु पर्यो ? बुढेसकालमा यसरी आँशुका धारा बगाउँदै हिँड्दा पनि न्याय पाइन् लक्ष्मीले, आखिर के समस्यामा छिन् लक्ष्मी ?यो पनि,रुपा सुनार पेशाले पत्रकार हुन् । उनीमाथि जातकै आधारमा बिभेद भएको छ । उक्त कुरा उनले फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले फेसबुकमा उक्त बिषयबारे एक भिडियो राखेकी छिन् । भिडियोमा उनी कोठा भाडामा खोज्न गएको, एक घरको कोठा मन परेको र भाडा र सबै कुरा मिलिसकेपछि जातकै आधारमा पछि घरबेटीले बस्न नदिएको दुखेसो उनले भिडियोमा बताएकी छिन् ।
निरन्तर बोलिरहनुपर्ने यो विषयमा आफ्नै संस्थाको सदस्य माथी पर्दा समेत आवश्यक पहलकदमी नलिइदिँदा, यो विषय संस्थाको प्राथमिकतामै नपरेको महसुस भएको छ । त्यसो हुँदा सो संस्थामा यथावत रहेर खर्चिने समय, सामाजिक न्यायको लागि उपयोग गर्ने गरि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेर सो संस्थाबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेको छु ।
नि’यमित शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्ने म’हिलाहरु कसरी चिनिन्छन्
कैलाली अपडेट: एक प्रहरीको शव भेटियो, अर्काको खोजी जारी